शुद्ध भूमि बौद्ध धर्म को अभ्यास र व्यवहार
मूल र व्यवहार
शुद्ध भूमि बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म को एक केहि अद्वितीय विद्यालय हो जुन चीन मा लोकप्रिय थियो, जसलाई यो जापान मा प्रसारित गरिएको थियो । आज, यो बौद्ध धर्म को अधिक लोकप्रिय रूपहरु मध्ये एक हो। महिनावाना बौद्ध परम्पराबाट विकसित गरिएको शुद्ध भूमिले आफ्नो लक्ष्य न्युवनमा स्वतन्त्रता नदेखेको देख्छ, तर एक अन्तर्वार्ता "शुद्ध भूमि" मा पुनर्निर्माण गर्दछ जसबाट निर्वाण तर छोटो कदम हो। शुद्ध भूमि बौद्ध धर्मको सामना गर्नुभएका प्रारम्भिक पश्चिमीहरूले स्वर्गमा वितरणको मसीही विचार समानता पाए, तथापि वास्तविकतामा, शुद्ध भूमि (प्रायः भनिन्छ सुखवती) धेरै फरक छ।
शुद्ध भूमि बौद्धता अमिताभ बुद्ध को पूजा मा केंद्रित छ, एक स्वर्गीय बुद्ध शुद्ध धारणा को प्रतिनिधित्व र खालीपन को एक गहिरो जागरूकता - एक विश्वास जो शुद्ध भूमि को पारंपरिक महाना बौद्ध धर्म को सम्बन्ध को दर्शाता छ। अमिताभको भक्तिमार्फत, अनुयायीहरूले आफ्नो शुद्ध भूमिमा पुनरुत्थान गर्ने आशा गर्छन्, ज्ञानको साथ अर्को अन्तिम चरण अर्को चरणमा। आधुनिक अभ्यासमा महायणका केही विद्यालयहरूमा, यो सोचेको छ कि सबै रहस्यमय साथीहरू आफ्नै शुद्ध भूमि छन्, र तिनीहरूमध्ये कुनै पनि उत्थान र चिन्तनले प्रकाश को मार्गमा राणाको संसारमा पुनरुत्थान गर्न सक्छ।
मूल भूमि बौद्ध धर्म को उत्पत्ति
दक्षिणपूर्वी चीनमा माउन्ट लुसुन, मुलाकात् विस्फोटका लागि मनाईन्छ जुन कम्पाइटको सरासर चोट र गहिरो जंगल घाटी। यो सुन्दर क्षेत्र पनि विश्व सांस्कृतिक स्थल हो। पुरातन समयमा त्यहाँ थुप्रै आध्यात्मिक र शैक्षिक केन्द्रहरू छन्। यीमध्ये शुद्ध भूमि बौद्धको जन्मस्थान हो।
402 ईस्वीमा, भिक्षु र शिक्षक हुआ-युआन (336-416) नेउन्ट लुसानको ढोकाहरूमा बनाइएको एक मठमा 123 अनुयायीहरू एकत्र गरे। यो समूह, व्हाइट लोटस सोसाइटी भनिन्छ, अमिताभ बुद्ध को छवि को सामने ले भन्यो कि उनि पश्चिमी प्रमोदवन मा पुनर्स्थापित हुनेछ।
शताब्दीमा पछ्याउन, शुद्ध भूमि बौद्धले भरिएको चीन भरमा।
सुवेवती, पश्चिम को शुद्ध भूमि, अमिताभ सुत्र मा चर्चा गरिएको छ, तीन सूत्र मध्ये एक कि शुद्ध भूमि को मुख्य ग्रंथहरु मा। यो धेरै ब्लाउज पैराजियजहरूको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो जसमा शुद्ध भूमि बौद्धहरू पुनरुत्थान हुने आशा छ।
थुप्रै तरिकामा शुद्ध भूमि बुझिन्छ। तिनीहरू अभ्यासको माध्यमबाट दिमागको एक राज्य हुन सक्छ, वा तिनीहरू वास्तविक स्थानको रूपमा सोच्न सकिन्छ। यद्यपि, यो बुझिएको छ कि एक शुद्ध भूमि भित्र, धर्म हरेक ठाउँमा घोषणा गरिएको छ, र प्रकाश को सजिलै संग एहसास हुन्छ।
तथापि, शुद्ध भूमि ईसाई सिद्धान्तहरु संग स्वर्ग मा भ्रमित नहीं हुनु पर्छ। एक शुद्ध भूमि अन्तिम गन्तव्य होइन, तर एक स्थानबाट पुनरुत्थान निर्वाणमा एक सजिलो कदम सोच्न सकिन्छ। यद्यपि, सम्भावना सम्भव छ कि अवसरको सम्झना र अन्य पुनरुत्थान फिर्ता सामासा को निचला स्तरहरुमा जानुहोस्।
हुआ-युआन र शुद्ध भूमिको अन्य प्रारम्भिक स्वामीहरूले विश्वास गरे कि सर्वोच्च तपस्याको जीवनको माध्यमबाट न्युवनको स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नु धेरै मानिसहरूको लागि निकै गाह्रो थियो। तिनीहरूले बौद्ध धर्मका पहिलेका विद्यालयहरूले "आत्म-प्रयास" लाई इन्कार गरे। बरु, एक शुद्ध भूमि मा आदर्श पुनरुत्थान छ, जहाँ माछा र साधारण जीवन को चिन्ता बुद्ध को शिक्षाहरु को समर्पित अभ्यास संग हस्तक्षेप गर्दैन।
अमिताभको दया को अनुग्रह गरेर, एक शुद्ध भूमि मा पुनर्जन्म आफैले केवल निर्वाण देखि एक छोटा सा कदम खोज्छ। फोर्ट उनको कारण, शुद्ध भूमि लेप्पल को साथ लोकप्रिय भएको थियो, जसको लागी यो अभ्यास र प्रतिज्ञा अधिक प्राप्त भयो।
शुद्ध भूमिको अभ्यास
शुद्ध भूमि बौद्धहरूले चार नोबल सत्य र आठौं पथ को आधारभूत बौद्ध शिक्षाहरू स्वीकार गर्छन्। शुद्ध भूमिका सबै विद्यालयहरूमा सामान्य अभ्यास सामान्यतया अमिताभ बुद्धको नाम हो। चिनियाँमा, अमिताभलाई अम-माइ-टू; जापानी मा, अमाइडा छ; कोरियामा, तिनी अमिता हुनुहुन्छ; वियतनामीमा, उहाँ ए-डे-दा हुनुहुन्छ। तिब्बती मंत्रमा, उहाँ एमिडेवा हुनुहुन्छ।
चिनियाँ भाषामा यो शब्द "Na-mu A-Mi-to Fo" (हेल, अमीडा बुद्ध) हो। जापानीमा एउटै मौन, नेम्बुत्सु भनिन्छ, "नमुू अमिडा बरु" हो। भित्री र ध्यान केन्द्रित गरिएको एक प्रकारको मन हो जुन शुद्ध भूमि बौद्ध दृश्य अमिताभ बुद्धलाई मद्दत गर्दछ।
अभ्यासको सबै भन्दा उन्नत चरणमा, अनुयायीले अमिताभलाई आफ्नै रूपमा अलग नगर्ने विचार गर्दछ। यो पनि, महायाना प्रान्त बौद्ध धर्म देखि सम्पदा को दर्शािन्छ, जहां देवता संग पहिचान अभ्यास को लागि मध्य छ।
चीन, कोरिया र वियतनाममा शुद्ध भूमि
शुद्ध भूमि चीन मा बौद्ध धर्म को सबै भन्दा लोकप्रिय स्कूलों मध्ये एक छ। पश्चिममा, अधिकांश बौद्ध मन्दिरहरूले जातीय चिनियाँ सामुदायिक सेवा गरिरहेका छन्। शुद्ध भूमिको केही भिन्नता हो।
वोनहो (617-686) कोरियामा शुद्ध भूमि परिचय भयो, जहाँ यसलाई जोंगो भनिन्छ। शुद्ध भूमि भियतनामी बौद्धहरूले पनि व्यापक रूपमा अभ्यास गरेको छ।
जापानमा शुद्ध भूमि
शुद्ध भूमि जापान मा हुन शोनिन (1133-1212), एक तेंदई मोर जसले स्थापना गरेको महारानी अभ्यास बाट निरुत्साहित भएको थियो। हेननले सबै अन्य प्राविधिक उपरोक्त Nembutsu को recitation मा दृष्टान्त जोड दिए, जसमा दृश्यहरु, अनुष्ठानहरु, र यहां सम्म कि रिसेप्शन पनि शामिल छ। होनको विद्यालयलाई जोडो-केओ अथवा जोडो शू (विद्यालयको पुर्व भूमि) भनिन्थ्यो।
हेनलाई दिनहुँ 60,000 चोटि नेम्बुत्तुको पढाइएको थियो। जब नाराज नगर्ने, उहाँले लेप्पल र मोनिक्सको साथमा नेम्बुत्सुको सद्गुणलाई प्रचार गर्नुभयो, र उहाँले ठूलो पछि लाग्नु भयो।
जीवनको सबै पक्षका अनुयायीहरूका लागि हीनको खुलापन जापानको शासक अभिजात वर्गको अप्ठ्यारो थियो, जसले जापानको टाढाको भागमा निर्वासित भएको थियो। धेरै हीनका अनुयायीहरू निर्वासित वा मारिएका थिए। अन्ततः हननलाई क्षमा दिइयो र उनको मृत्यु करिब एक वर्ष पहिले क्योटो फर्किने अनुमति दिइयो।
हेननको मृत्युपछि, आफ्ना अनुयायीहरू बीचको जोसु शूको उचित सिद्धान्तहरू र अभ्यासहरूमा विरूद्ध विवादित छन्, जसलाई धेरै विभेदकारी गुटहरूको नेतृत्व गरिन्छ।
एक समूह हुेनको चेला, शोकोबो बेन्को (1162-12 1238) को नेतृत्वमा चिनजी थियो, जसलाई शको भनिन्छ। शोकले नेम्बुत्सुको धेरै पुनरुत्थानलाई पनि जोड दिए तर विश्वास गरे कि निम्म्बुको एक मात्र अभ्यास हुनु पर्दैन। शोकोबो जोडो शूको दोस्रो पितृशिका मानिन्छ।
अर्को चेला, शिनरन शोनिन (1173-1262), एक भिक्षु थियो जसले विवाह गर्न को लागी खुशीको भङ्ग भङ्ग गर्यो। शिमरन नेम्म्बु को पढाई को संख्या मा धेरै समय मा अमिताभ मा विश्वास बलियो भयो। उहाँ विश्वास गर्न पनि आउँथे कि अमिताभलाई भक्तिको लागि कुनै पनि आवश्यकताको मोहम्मद चाहिन्छ। उनले जोडो शिनशो (सच्चा स्कूल को शुद्ध ल्यान्ड) को स्थापना गरे, जसले मठहरुलाई समाप्त गर्यो र विवाहित पूजाहारीहरु को अधिकृत गर्यो। Shodo Shinshu को कहिलेकाहीं शिन बौद्ध धर्म भनिन्छ।
आज, शुद्ध भूमि - जोदो शिनू, जोडो शू, र केहि साना सेकेन्ड समेत - जापानमा बौद्ध धर्मको सबैभन्दा लोकप्रिय रूप हो, जसलाई जेन भन्दा बढी छ।
माता साहब कौर (1681 - 1747)
के परमेश्वरले तपाईंलाई कल गर्दै हुनुहुन्छ?
9 Beginners को लागि महान Taoism पुस्तकहरु
एक्यूप्रेचर खजाने: बाई - सौ कन्वर्जेन्सी
12 x 1000 € कसरी जर्मनीमा रहन - कुनै हुकहरू
गेहेना के हो?
प्राचीन मानव इतिहास मा शीर्ष 10 आविष्कार
एनएफएलको शीर्ष5पिता-पुत्र संकलन
रसायन विज्ञान मा समाधान को परिभाषा
बाढी बीमा मिथकहरू र तथ्यहरू
अमेरिका मा ब्लू कानून को मूल
कसरी चालिएको जन्मदिन मोमबत्तिको काम गर्दछ?
डायरी, जर्नल, वा लिटरको नोटबुक राख्ने मूल्य
कसरी सही स्किज छनौट गर्नुहोस्
कीराहरू के हुन्?
थ्रेसफर शार्कको बारेमा रमाइलो तथ्य
शीर्ष 10 एक दिशा गीत
प्रेतवाधित कथाहरु प्रेतवाधित स्कूलहरु बारे
5 पौराणिक योद्धा - एशियाका महिलाहरु
कम (शब्द फारमहरू)
किन तपाईंले आफ्ना हातहरू धोका दिनुपर्छ (र कसरी यो गर्ने कुरा)
रैंड () PHP प्रकार्य
फ्रांसीसी प्रसव 'संस': यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने